Farmaajo dal u nax iyo dastuur dhowr midna maleh! | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo dal u nax iyo dastuur dhowr midna maleh!
16-kii September 2021 kadib, madaxweynihii muddadu ka dhamaatay Farmaajo, mar kale, wuxuu ku dhawaaqay inuu shaqada ka joojiyay RW Maxamed Xuseen Rooble.
MUQDISHO, Soomaaliya – Sida aan hore u baahinnay Farmaajo, wuxuu hor istaagay dadaallada la doonayo in lagu saxo khaladaadka hareeyay hannaanka doorashooyinka, wuxuuna Axaddii soo saaray bayaan u jeedkiisu ahaa carqaladeyn iyo jid-gooyo.
Farmaajo, wuxuu sheegay inuu dib ula wareegay hoggaanka dorashooyinka, isla-markaasna uu ku baaqay in Goleyaasha Dowladda ee Heer Federaal, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir, isugu yimaadaan shir wadatshi ah oo lagu saxayo jihaynta doorashooyinka.
Isla-qodobkaas, wuxuu ku xusay in loo baahan yaahy in dhinacyada isku imaanaya isku waafaqaan hoggaan awood u leh hirgelinta doorasho dhammeystiran oo si hufan dalka uga dhacdo, waa sida uu hadalka u dhigaye.
Haddaba Keydmedia Online, waxa ay fahansan tahay in Farmaajo uu qoobkaas, si buuxda ugu caddeeyay qorshaha uu doonayo inuu hirgaliyo billowga bisha Jannaayo ee foodda nagu soo heysa.
Goleyaasha Dowladda ee Heer Federaal, ayuu tilmaamay in shirka uu ku baaqay ay ka soo qeyb galaan, tallaabadaas ayaana ka dhigan inuu dib ugu yeeray baarlamaankii 11-aad ee JFS, kuwaas oo waqtigoodu dhacay 27-kii December 2020, lana doortay qeyb ka mid ah xubnihii beddeli lahaa.
Sidoo kale, wuxuu sheegay in dhinacyada isku imaanaya ay ka heshiinayan hooggan awood u leh hirgelinta doorashada, taas oo la micno ah in Farmaajo si deg deg ah uu u doonayo in xubno ka tirsan baarlamaankii 11-aad isugu tagaan Villa Hargeysa, si uu bilowga Jannaayo ugu sameeyaan muddo kordhin hor leh.
Dhaqan galinta tallaabadaas ka hor, Farmaajo, wuxuu xalay ku dhawaaqay inuu shaqada ka joojiyay RW Rooble markii labaad 100 maalin gudahood, taas oo lagu macneeyay ku tumasho sharci iyo baalmaridda dastuurka, maadaama uusan jirin sharci u oggolaanaya tallaabadaas.
Sida ku cad dastuurka, xil-ka qaadista Wasiisrka 1-aad waxa ay imaaneysaa marka baarlamaanku kala noqdo kalsoonida, hadda ma jiro baarlamaan shaqeeya, oo kalsooninada kala laabtay Rooble, waana sababta aysan dhaqan gal u ahayn waraaqda Farmaajo oo sifo sharci darro ah ku deggan Madaxtoyada.
Sidoo kale, Qodobka 109aad ee dastuurtka, wuxuu dhigayaa in Xukuumadda Xil-Gaarsiinta inta u dhaxaysa taariikhda doorashada guud iyo marka Ra’iisul Wasaaraha cusub la dhaarin doono, uu Ra’iisul Wasaarihii hore ee xilka hayey iyo Golihiisa Wasiiradu sii haynayaan xilka.
Ma jirto awood dastuuri ah oo Madaxweyne Soomaaliyeed oo sharciyad heysta siineysa inuu soo saaro waraaq uu shaqada kaga joojinayo Ra’iisul Wasaare, iska dhaaf Farmaajo oo muddadiisii sharciga ahayd dhamaatay ku dhawad 330 cisho ka hor.